warkii.com » “Qof Kasta Oo Qaladka Mbappe Arkay Wuu Walaacay” – Tababaraha PSG Oo Ka Dayriyey Dhaawac Xalay Soo Gaadhay Kylian Mbappe
“Qof Kasta Oo Qaladka Mbappe Arkay Wuu Walaacay” – Tababaraha PSG Oo Ka Dayriyey Dhaawac Xalay Soo Gaadhay Kylian Mbappe
Tababaraha Thomas Tuchel ayaa qirtay inuu aad uga walaacsan yahay dhaawaca soo gaadhay weeraryahanka kooxdiisa ee Kylian Mbappe kulankii Paris Saint-Germain ay 1-0 kaga badisay Saint-Etienne.
Mbappe ayaa ciyaarta laga saaray qaybtii hore ee kulankii finalka Coupe de France ee xalay kaddib markii uu dhaawac kasoo gaadhay kuraanta, iyadoo uu qalad xun ku galay Loic Perrin oo ka tirsan Saint-Etienne.
Dhaawacan oo kusoo beegmay saddex toddobaad ka hor kulanka Champions League ee ay PSG foodda isku dari doonaan Atalanta wareegga siddeeda, ayaa waxa uu walaac weyn ku yahay kooxda reer France oo ka baqaysa in Kylian Mbappe uu guud ahaan tartankaas seegi doono.
Tababare Tuchel oo warbaahinta la hadlay kaddib ciyaartaas, ayaa yidhi: “Qof kasta oo arkay wuu walaacsan yahay, qof kasta oo arkay qaladka lagu galayna walaac ayuu dareemayaa.”
Kulankan oo ka dhacay garoonka qaranka oo ay fadhiyeen shan kun oo taageereyaal ah oo ilaaliyey sharciga xakamaynta fayraska Korona oo ku kala faalalay garoonka dhexdiisa, waxa PSG badbaadiyey Neymar oo daqiiqaddii 14aad ee ciyaarta u dhaliyey goolka ay guushu ku raacday.
Laakiin ciyaarta oo la bixiyey casaan iyo 10 kaadh oo digniin ay, waxay PSG dareensan tahay in garsoorihii dhexdhexaadinayay ee Amaury Delergue uu dhinacooda ku ciiray oo aanu caddaalad u samayn.
Tuchel oo cabashada garsooraha warbaahinta ka hor sheegay ayaa yidhi: “Waxay ku bilaabantay qalad lagu galay Neymar. Saddex kaadh oo digniin ah ayaanu qaadanay kaddib qaladkii Kylian.”
Tuchel oo si gaar ah ula hadlayay Wargeyska L’Equipe ayaa intaa ku daray: “Bilowgiiba kaadh ayuu ku bixiyey qaladkan, anaguna, waxaanu weydiisanaynay inuu ilaaliyo ciyaartoyga, saddex kaadhna waanu qaadanay.
“Kuwani maaha shuruudaha la dabakho. Waxaan hadalkan u odhanayaa ciyaartoyda oo dhan. Taageereyaal ayaa joogay ciyaartoyda daawanayay, dad ayaa sidoo kale telefishannada ka fiirsanayay. Waxa ugu muhiimsanna waa in dhamaan ciyaartoyda la ilaaliyo, maaha kuwayga oo kaliya.”
Si kastaba, Kylian Mbappe ayaa dhaawac kasoo gaadhay kuraanta, waxaana isagoo ooyaya laga saaray garoonka. Waqti gargaar caafimaad loogu fidinayay bannaanka garoonkana, waxa uu ugu dambayntii dhamaadka ciyaarta garoonka ka baxay isaga oo biro ku boodaya oo aan lugta dhulka dhigi karayn.